I-Foundation Foundation yabhalwa njengeScottish Charitable Incorporated Organisation kwi-23 Juni 2014. Sibhaliswe i-SC044948 yokuncedisa kunye ne-Ofisi yeSilawuli saseScottish Charity, i-OSCR. Ixesha lokunika ingxelo ngezimali liqhuba ukususela ngoJulayi ukuya kuJuni ngamnye ngonyaka. Kule khasi sishicilela ingxelo yeNgxelo yonyaka ngamnye. I-akhawunti epheleleyo yakutshanje iyatholakala kwi Website yeOSCR kwifom ehlukileyo.
Ingxelo yonyaka ka-2019-20
Ingxelo yonyaka ka-2018-19
Umsebenzi wethu wawujoliswe kwiindawo ezininzi
Ukuphucula ukusetyenziswa kwemali yothando ngokufaka izibonelelo kunye nokwandiswa kwezorhwebo
Ukuphucula ubudlelwane kunye nabasebenzi abanokubakho eScotland nakwihlabathi jikelele ngokusebenzisa intsebenziswano
Ukwandisa inkqubo yethu yokufundisa ezikolweni kusetyenziswa imodeli yesayensi yomjikelezo wesiphaluka kunye nendlela idibana ngayo nemeko
Ukwakha iphrofayili kazwelonke neyamazwe ngamazwe ukwenza i-TRF 'intlangano' yokuthembeka kubantu kunye nemibutho efuna inkxaso kwinkalo ye-intanethi ilimaza njengendlela yokuphucula ukuqonda koluntu kwakha ukuzinza ukunyanzelisa
Ukwandisa ubukho bethu bewebhu kunye nentlalo yoluntu ukwakha i-brand yethu phakathi kwabaphulaphuli eScotland nakwihlabathi jikelele
Mary Sharpe continued her role as chair of the Public Relations and Advocacy Committee at the Society for the Advancement of Sexual Health (SASH) in the USA. In 2018 Mary was nominated as one of the WISE100 iinkokheli zentombi kwiinkampani zentlalo.
I-TRF iqhubekile ukuhambisa i-intanethi ye-intanethi ukulimaza uqeqesho lokuqwashisa ezikolweni, ootitshala kunye noluntu jikelele.
Ingxelo yonyaka ka-2017-18
Ukuqhuba imisebenzi yoqeqesho nokuphuhlisa ukuphakamisa amanqanaba ekhono leqela le-TRF ukuqinisekisa ukuba unokukwazi ukuhambisa le mijelo yomsebenzi eyahlukeneyo
Saqhubeka nokusebenzisa isibonelelo 'sokuTyala kwiiNgcebiso' kwi-Big Lottery Fund ukuphuhlisa nokuvavanya izixhobo zekharityhulam ukuze zisetyenziswe ngabafundisi bezikolo eziziiprayimari neziziisekondari kwizikolo zikarhulumente.
I-TRF iyaqhubeka nokwandisa ubukho bayo kwimfundo yesondo, ukukhuselwa kwe-intanethi kunye neenkcukacha zokulimaza inzondo, ukuya kwiinkomfa ze-12 kunye neziganeko eScotland (unyaka odlulileyo 5), i-3 eNgilani (unyaka odlulileyo 5) kunye ne-2 e-USA kunye nganye eCroatia naseJamani.
Ngethuba lonyaka sasebenza kunye nabantu abangaphezu kwe-3,500 ngomntu kwaye sithunyelwa malunga nomntu we2,920 / iiyure zoqhagamshelwano noqeqesho.
Kwi-Twitter ngexesha lokusukela ngoJulayi 2017 ukuya kuJuni 2018 siye sazuza i-174,600 tweet impressions, ukusuka ku-48,186 kunyaka owedlule.
NgoJuni 2018 songeze i-GTranslate kwiwebhusayithi, sinika ufikelelo olupheleleyo kumxholo wethu kwiilwimi ze100 ngokuguqulelwa komatshini.
Ngonyaka senza iinguqu ze-5 zeeNkcazo eziKhuselekileyo kwaye uluhlu lwethu lokuposa lwaba yi-GDPR eyanelisayo. Ngethuba lonyaka sashicilele iposi ze-blog ze-33 ezigubungela imisebenzi ye-TRF kunye namabali amva malunga nefuthe le-intanethi kwi-intlalo. Oku kwakuyi-blogs ye-2 ngaphezulu kunonyaka odlulileyo. Sinesiqendu esinye esapapashwa kwiphephancwadi eliphononongwa ngontanga.
Ngethuba lonyaka i-TRF yaqhubeka ibonakala kumajelo eendaba, ibonakala kwiindaba zephephandaba ze-21 e-UK nakumazwe ngamazwe (unyaka odlulileyo 9) kunye kwakhona kwi-TV ye-BBC eNyakatho ye-Ireland. Sivezwe kwi-interview ye-4.
UMary Sharpe waqhubeka nenxaxheba yakhe njengosihlalo woBudlelwane boLuntu kunye neKomiti yokuLawulwa kuMbutho weNtuthuko yezeNtlalo (SASH) e-USA.
I-Foundation Foundation yabangela ukuba uphendule kwi-Intanethi ye-Intanethi ye-Intanethi yokuThuthukiswa kweGreen Green Paper. Senze kwakhona ukungeniswa kweQela loKhuseleko lwe-Intanethi kwiSebe leDividenti, iNkcubeko, iMedia kunye neMidlalo kwizilungiso ezicetywayo kuMthetho wezoLwazi lwezoDigedu.
Sifinyelele kwiKholeji yaseRoyal of General Practitioners Accreditation ukuhambisa iikhosi zeentsuku zonyango kubaqeqeshi bezempilo njengengxenye yeenkqubo zabo zokuPhuculo loPhuhliso. Iindibano zocweyo ze-CPD zanikelwa kwiidolophu zase4 UK.
I-TRF iqhubekile ukuhambisa i-intanethi ye-intanethi ukulimaza uqeqesho lokuqwashisa ezikolweni, ootitshala kunye noluntu jikelele. Siye saxhasana kunye neprogram yesikolo ye-workshop ye-Wonder Fools I-Coolidge Impact kwiTraverse Theater.
I-CEO yethu kunye noSihlalo baya kwiprogram yokuqeqesha eCartyst e-Edinburgh ngeentsuku ze-3.
Sinikele ngomntu wonke we-1,120 / iiyure zokuqeqeshwa kwamahhala, kuphela nje nge-1,165 yonyaka ophelileyo. I-TRF inikezela ukuqeqeshwa kwamahhala kunye neenkonzo zolwazi kumaqela alandelayo:
Sinikezela kubazali be-310 kunye neengcali kumacandelo omphakathi, ukususela kwi-840 yonyaka odlulileyo
I-CEO iqhutywe phambi kwabantu be-160 kwi-studio ye-studio abaphulaphuli kwi-BBC Northern Ireland. Icandelo leminye le-10 lisasazwa kwi-Nolan Show, inkqubo ephakamileyo kakhulu e-Northern Ireland
Sinikezela kwi-908 abantu kumaqela abaqeqeshiweyo kunye namaziko kwiinkomfa kunye neemeko eScotland, eNgilani, e-USA, eJamani naseCroatia, ukusuka ngonyaka we-119 wonyaka odlulileyo.
Sinikezele ngokuzenzekela ngokuzithandela kwabafundi baseyunivesithi kwaye sidibanisa inkqubo yokuyila imifanekiso edibanisa i-15 kwi-semester epheleleyo.
Ingxelo yonyaka ka-2016-17
NgoFebhuwari 2017 sithole i-£ 10,000 'Intsingiselo kwiiNgcebiso' isibonelelo kwi-Big Lottery Fund ukuphuhlisa iimpahla zekharityhulam zokusetyenziswa ngabafundisi bezikolo eziprayimari neziziisekondari kwizikolo zikarhulumente.
Ukususela kwi-1 NgoJuni 2016 ukuya kwi-31 Ngangomhla we-2017 umvuzo we-CEO ubhalwe phantsi kwesibonelelo esivela kwi-UnLtd ye-Millennium Awards 'yokwakha' isibonelelo se-£ 15,000 ehlawulwa yona.
UMary Sharpe wagqiba ukuqeshwa kwakhe njengeSclar Tourist kwiYunivesithi yaseCambridge ngoDisemba 2016. Ulwalamano noCambridge luxhasa ukuphuculwa kweprojekthi yophando lwe-TRF.
I-CEO kunye noSihlalo bazalise inkqubo yoQeqesho lwe-Social Innovation Incubator Award (SIIA) yoqeqesho lophuhliso loshishino kwi-Melting Pot.
I-TRF iyaqhubeka nokwandisa ubukho bayo kwimfundo yesondo, ukukhuselwa kwe-intanethi kunye neenkcukacha zokulimaza inzondo, ukuya kwiinkomfa ze-5 kunye neziganeko eScotland, i-5 eNgilandi kunye nabanye base-USA, i-Israel ne-Australia. Ukongezelela, amaphepha amathathu ahlaziywe ngontanga abhalwe ngamalungu e-TRF ayapapashwa kwiimagazini zezemfundo.
Kwi-Twitter ngexesha lokusukela ngoJulayi 2016 ukuya kuJuni 2017 sandise inani lethu labalandeli kwi-46 ukuya kwi-124 kwaye sathumela i-tweets ze-277. Baphumelele kwi-48,186 tweet impressions.
Sathuthela iwebhusayithi www.rewardfoundation.org kwisevisi entsha yokubamba ngokukhawuleza ngokukhawuleza kakhulu kubasebenzisi kunye noluntu. NgoJuni 2017 sazisa iiNdaba eziKhuselekileyo, incwadana esilujolise kuyo ukupapasha amaxesha angama-4 ngonyaka. Ngethuba lonyaka sashicilele iposi ze-blog ze-31 ezigubungela imisebenzi ye-TRF kunye namabali amva malunga nefuthe le-intanethi ye-intanethi.
Ngethuba lonyaka i-TRF yaqala ukubonakala kumajelo eendaba, kubonakala kwiindaba zephephandaba ze-9 e-UK kunye nakwi-TV ye-BBC eNyakatho ye-Ireland. Siye sabonakala kwiingxoxo ezimbini zentengiso zomsakazo nakwividiyo ezisekhompyutheni ezipapashwe yi-OnlinePROTECT.
UMary Sharpe wabhala isahluko esinesihloko I-Intanethi ye-Intanethi ye-Intanethi kunye noTyala loSondo kunye noSteve Davies ngencwadi ethi 'Ukusebenzisana Nabanye Abantu abaye benza iziTyala zoSondo: Isikhokelo sabaSebenzi. Yapapashwa nguRoutledge ngo-Matshi 2017.
UMary Sharpe waba ngumongameli weKomiti yoBudlelwane boLuntu kunye neNkxaso yoLuntu kuMbutho weNtuthuko yezeMpilo yezesondo (SASH) e-USA.
I-Foundation Foundation yabonelela ngeendlela zokubonisana kunye neSicwangciso seScotland sokuthintela nokuphelisa ubundlobongela kwabasetyhini kunye namantombazana, ikamva lekharityhulam yeZiqu kunye nezeMfundo zoTyala kwiziko leScotland kunye nophando lwePalamente yasePanada malunga nemiphumo yempilo yobuninzi boonografi.
Isiseko soMvuzo sidweliswe njengesixhobo esinekhonkco kwiphepha lethu lasekhaya kwiSicwangciso sokuSebenza kuZwelonke kuKhuseleko lwe-Intanethi yaBantwana naBantu aLutsha epapashwe nguRhulumente waseScotland. Sibe negalelo kwiQela eliSebenzayo lePalamente yase-UK kwiNtsapho, iiNkosi kunye neQela eliKhulu leNtsapho kunye neQela lokuKhusela abantwana iinzame zokunceda ukudluliselwa koMthetho oYilwayo wezoQoqosho kwiDijithali ngePalamente yase-UK.
Sinikele ngeeyure ezingama-1,165 zokuqeqeshwa kwamahhala, ukusuka ku-1,043 kunyaka odlulileyo. Sinike iinkonzo zoqeqesho kunye nolwazi kumaqela alandelayo:
Abafundi be-650 ezikolweni eScotland
Abazali be-840 kunye neengcali kumaqela asekuhlaleni
Abantu be-160 kwi-studio ye-studio abaphulaphuli kwi-BBC Northern Ireland. Icandelo leminye le-10 lisasazwa kwi-Nolan Show, inkqubo ephakamileyo kakhulu e-Northern Ireland
I-119 kumaqela aqeqeshekileyo kunye namaziko kwiinkomfa kunye neziganeko eScotland, eNgilani, e-USA nakwaSirayeli
Sinike izibonelelo zokuzithandela ze-4 kubafundi besikolo nakwiyunivesithi.
Ingxelo yonyaka ka-2015-16
Ukuphucula ukusetyenziswa kwemali yothando ngokufaka izibonelelo kunye nokuqala ukurhweba kwezorhwebo
Ukuphucula ubudlelwane kunye nabasebenzi abanokuthi baseScotland ngokuthungelwano
Ukuseka inkqubo yokufundisa ezikolweni usebenzisa umzekelo wesayensi wecandelo lomvuzo wengqondo kunye nendlela edibana ngayo nemeko
Ukwakha iphrofayili kazwelonke neyamazwe ngamazwe ukwenza i-TRF ukuba 'intlangano' ethembekileyo kubantu kunye nemibutho efuna inkxaso kwiindawo ze-intanethi ziphazamisa njengendlela yokuqhubela phambili ukuqonda koluntu ukwakha ukuqina ukuxinezeleka
Ukwandisa ubukho bethu bewebhu kunye nentlalo yoluntu ukwakha yethu ibhendi phakathi kwabaphulaphuli eScotland nakwihlabathi jikelele
Isicelo esiphumeleleyo senziwe kwi-UnLtd ngembasa "Yokwakha" ibhaso le- $ 15,000 yokuhlawula uMary Sharpe umvuzo wonyaka ukusukela ngoJuni 2016. Ngenxa yoko ngoMeyi ka-2016 uMary warhoxa njengomphathiswa wesisa watshintshela kwindima yeNkosi IGosa eliLawulayo. UGqr Darryl Mead wonyulwa yiBhodi njengoSihlalo omtsha.
Umsebenzi okhokelwa nguMary Sharpe ukuphuhlisa intsebenziswano yabasebenzi abanokubambisana. Iintlanganiso zaqhutyelwa kunye nabameli beeNtolongweni eziPhezulu, iiNkqubela eziPheleleyo ?, Umbutho waseScottish Catholic Education, uLotians Health Health, iHSS Lothian Respect, i-Edinburgh yeBhunga leSixeko, isenzo sezempilo saseScotland kwiingxaki zoTywala kunye noNyaka kaTata.
UMary Sharpe wamiselwa njengeScott Tourist kwiYunivesithi yaseCambridge ngoDisemba 2015. UDarryl Mead wamiselwa njengoMntu oPhando loBugcisa kwi-UCL. Ulwalamano nala manyuvesi luxhasa ukuphuculwa kweprojekthi yophando lwe-TRF.
UMary Sharpe wagqiba uqeqesho lwakhe ngeNkqubo ye-Social Innovation Incubator Award (SIIA) kwi-Potting Pot. Emva koko wajoyina inkqubo ye-SIEE ekhawulezileyo, kunye nelungu leBhodi uDkt Darryl Mead.
I-TRF yavelisa ubukho kwintsimi yokukhusela i-intanethi kunye nemimandla yenzakaliso engamanyala, ukuya kwiinkomfa ze-9 UK.
Amaphepha abhalwe ngamalungu e-TRF avunyelwe ukuba avezwe eBrighton, eGlasgow, Stirling, eLondon, e-Istanbul naseMunich.
NgoFebhuwari 2016 sazisa yethu i-twitter feed @brain_love_sex kwaye yandisa i-website kwi-20 ukuya kwi-70. Kwakhona sithatha ukuqhuba le website kwi-developers.
UMary Sharpe wabhala isahluko esinesihloko I-Intanethi ye-Intanethi ye-Intanethi kunye noTyala loSondo kunye noSteve Davies ngencwadi ethi 'Ukusebenzisana Nabanye Abantu abaye benza iziTyala zoSondo: Isikhokelo sabaSebenzi. Iya kupapashwa nguRoutledge ngoFebruwari 2017.
UMary Sharpe ukhethwa kwiBhodi yoMbutho weNtlalo yoPhuhliso lwezeNtlalo (SASH) e-USA.
I-TRF ithumele iimpendulo kwi-Inquiry yase-Australia Inobungozi eyenziwa kubantwana base-Australia ngokufikelela kwiimifanekiso engamanyala kwi-Intanethi kunye nokubonisana noRhulumente wase-UK Ukhuseleko lwabantwana kwi-Intanethi: Ukuqinisekiswa kwexesha lobudala kwizithombe ezingcolileyo
Saqala ukuhambisa i-pornography ye-intanethi ukulimaza uqeqesho lokuqwashisa ezikolweni zaseScotland ngokushishino.
I-TRF ithole isibonelelo se-£ 2,500 njengenkxaso yemali yokudala iwebhusayithi enkulu yolutsha. Kuya kuququzelelwa kunye nabantu abatsha abakhankanywe kubalaleli abajoliswe kuzo.
Sinikele ngeeyure ezingama-1,043 zokuqeqeshwa kwamahhala, ukusuka ku-643 kunyaka odlulileyo.
Sinike iinkonzo zoqeqesho kunye nolwazi kumaqela alandelayo:
Ootitshala be-60 ekuqeqesheni kwangaphakathi kwenkonzo e-Edinburgh City Council
Izikhulu zezempilo zezesondo ze-45 ze-NHS Lothian
Abadlali be-3 be-Wonder Fools e-Glasgow
Amalungu e-34 yoMbutho weSizwe weNyango yokuThatshazwa
Abathunywa be-60 kwiNgqungquthela ye-Inttect yaseLondon
Abathunywa be-287 kwi-International Congress of Technology Addiction e-Istanbul, eTurkey
Abaculi be-33 nabafundi bezobugcisa kwiKholeji yaseRoyal yase-London
Amalungu e-16 we-Melting Pot, ngokubambisana noDkt Loretta Breuning
Abasebenzi be-43 kwiSikolo sezeMpilo seCalmers eSiginburgh
Abathunywa be-22 kwiNgqungquthela ye-DGSS yoPhando lwezeNzululwazi ngezesondo kwiMunich, eJamani
Abafundi be-247 kwisikolo saseGeorge Heriot e-Edinburgh Sinike i-3 iindawo zokuzivocavoca kubafundi besikolo nakwiyunivesithi.
Ingxelo yonyaka ka-2014-15
Uchungechunge lweentetho eziboniswe ngabafundi bezakhono eziye zaveliswa nguMary Sharpe noDarryl Mead zibeka indlela yokusebenza kwesekethe yomvuzo wengqondo. Oku kuhlolisise inkqubo yoxilongo, kuchaza i-stimuli engaqhelekanga kwaye ichaze indlela indlela i-intanethi ye-intanethi ingaba ngayo umlutha wokuziphatha. Abaphulaphuli abafikelelekileyo bachazwe ngezantsi. UMary Sharpe uthetha malunga ne-150 kubasebenzi baseburhulumenteni abasebenzela uRhulumente waseScotland.
Ibhodi yavumelana nomgaqo-siseko.
Ibhodi yavuma abaphathi beofisi.
Emva koko ibhodi yavuma isicwangciso soshishino.
I-Akhawunti yeBhanki yeNondyebo yenziwe ngokungekho-ntlawulo ngeBhanki enkulu yaseScottish.
Ubunikazi bokuqala kunye nejelo zamkelwa.
Isivumelwano saqulunqwa kwimirhumo yencwadi Ubuchopho Bakho kwi-Porn: Iimifanekiso zoononopasho ze-Intanethi kunye neSayensi eVukayo yoLungiso ukuba unikezwe ngumbono nguMlobi kwiSiseko soMvuzo. Intlawulo yokuqala yobukhosi yafunyanwa.
UMary Sharpe njengoSihlalo uphumelele indawo kwinkqubo yoqeqesho kwi-Social Innovation Incubator Award (SIIA) kwi-Melting Pot. Ibhaso libandakanya unyaka wokusetyenziswa simahla kwendawo kwindawo yokunyibilika.
UMary Sharpe uzuze i-£ 300 kwi-Foundation Reward Foundation kwi-competition ye-SIIA.
UMary Sharpe ufake isicelo kwaye waphumelela ibhaso le- $ 3,150 kwiNqanaba 1 lenkxaso mali evela kwiFirstPort / UnLtd ukusivumela ukuba sakhe iwebhusayithi esebenzayo. Ingeniso evela kweli bhaso ayizange ifunyanwe kude kube ngunyaka-mali olandelayo.
Iqumrhu lokuthengisa lenzelwe ukuphuhlisa i-website kunye nesethi esicacile ngakumbi yemifanekiso yenkampani.
Sinikele ngeeyure ezingama-643 zokuqeqeshwa kwamahhala.
Siqeqeshe aba baqeqeshi balandelayo: ama-20 amagosa ezempilo ezesondo kwi-NHS Lothian, imini yonke; Abasebenzi bezempilo abangama-20 kwiNkqubo yeLothian & Edinburgh Abstinence Programme (LEAP) iiyure ezimbini; Abasebenzi abangama-2 kwezobulungisa kulwaphulo-mthetho kuMbutho waseScotland woFundo lokuLungisa iiyure eziyi-47; Abaphathi abangama-1.5 ePolmont Iziko lamaGatya aLutsha iiyure ezi-30; Abacebisi abangama-2 kunye neengcali zokhuselo lwabantwana kwisebe laseScotland loMbutho weSizwe woNyango lwaBaxhaphazi (i-NOTA) iiyure eziyi-35; Ngama-1.5 abafundi beklasi yesithandathu kwiSikolo saseGeorge Heriot kangangeeyure eziyi-200.
Sinike izibonelelo zokuzithandela ze-3 kubafundi besikolo nakwiyunivesithi.